Simple'Z | ပုံပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်
မူလစာမျက်နှာ > ဝန်ဆောင်မှု > ပုံဖန်တီးခြင်း
ပုံဖန်တီးခြင်း၊ ပုံသားဖြတ်ယူခြင်းနှင့် Banner ပြုလုပ်ခြင်း
ပုံဖန်တီးခြင်း၊ ပုံသားဖြတ်ယူခြင်းနှင့် Banner ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့ Photoshop နည်းပညာကိုအသုံးချရသောအလုပ်များကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ပုံဖြတ်ယူခြင်း ယန်း၃၀ Light plan ၁၀၀၀နှင့်အထက် နောက်ခံမပြောင်းလဲပဲ ပုံအရွယ်အစားနှင့်နာမည်ပြောင်းလဲခြင်း
ပုံသားဖြတ်ထုတ်ယူခြင်း ယန်း၇၀ Standard plan ၄၃၀နှင့်အထက် ပုံများကိုသေသပ်စွာဖြတ်ယူ၍နောက်ခံအဖြူရောင်အဖြစ်ထားရှိခြင်း။ ပုံအနေအထားအရဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိပါသည်။
ယန်း၁၃၀ Heavy plan ၂၃၁နှင့်အထက်
Quotation တောင်းရန် Special plan -
※အလုပ်အပ်နှံမှုအပေါ်မူတည်၍ ခန့်မှန်းစာရင်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။ ဆက်ဆက်ခန့်မှန်းစာရင်းကိုကြည့်၍အလုပ်အပ်နှံပါ။
ပုံသားဖြတ်ထုတ်ယူခြင်း ဈေးနှုန်းနှင့်နမူနာ အလုပ်ခက်ခဲမှုအဆင့်ပေါ်အခြေခံ၍ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှ တစ်ခုချင်းစီ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်သွားပါမည်။ နမူနာပုံကိုအညွှန်းထားပြီးပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိစေလိုပါသည်။
အရေအတွက်အများအပြားလိုအပ်မှု၊ ပုံမှန်အော်ဒါမှာယူမှုနှင့်ပတ်သတ်၍စိတ်ကျေနပ်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် Customer များဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါပုံပေါ်တွင် cursor(pointer) တင်ကြည့်လျှင်ဖြတ်ယူထားပြီးသောပုံကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
Rakuten Ichiba, Yahoo!, Shop နှင့် Amazon ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းဆိုင်များအတွက်ထုတ်ကုန်ပုံများဖန်တီးပေးသော ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ .
ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း ယန်း ၂၅၀ မှစတင် ၁၂၀ ပွိုင့် နှင့်အထက် ဒီဇိုင်းများများမလိုအပ်သော ရိုးရှင်းသော ထုတ်ကုန်ပုံများ ဥပမာ) စက်ရုံအမည်, ထုတ်ကုန်အမည်, ထုတ်ကုန်နံပါတ်, ထုတ်ကုန်ပုံ
Thumbnail ထုတ်လုပ်မှု ယန်း ၂၅၀ မှစတင် ၁၂၀ ပွိုင့် နှင့်အထက် ကျွန်ုပ်တို့သည် All-In-One ဒီဇိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပုံများထုတ်လုပ်သည်။ ပြုလုပ်ရသော အဆင့်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ပမာဏ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
All-In-One ဒီဇိုင်း - - မြင့်မားသောဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပုံရိပ် ကုန်ကျစရိတ် သည် ပုံအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည် Banner ပြုလုပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းဆိုင်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြော်ငြာများအတွက် banner ပြုလုပ်ခြင်း
Banner production ယန်း ၈၀၀ အလွန်သေးငယ်သောဆိုဒ် (အလျား + အကျယ် = 200px အတွင်း) ၃၈ ပွိုင့် နှင့်အထက် ထုတ်ကုန် bannner များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကြော်ငြာ banner များ၊ Sale banner များအတွက် အ ခြေခံဒီဇိုင်းများ banner ဆိုဒ်ပေါ် မူတည်၍ ကုန်ကျစရိတ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ (စုစုပေါင်း အလျား + အကျယ်).
ယန်း ၃၀၀၀ ဆိုဒ်အသေး (အလျား + အကျယ် = 201 မှ 600 px အတွင်း) ၁၀ ပွိုင့် နှင့်အထက်
ယန်း ၄၀၀၀ အလတ်ဆိုဒ် (‌‌‌ဒေါင်လိုက် + အလျားလိုက် = 601 မှ1000px အတွင်း) ၈ ပွိုင့် နှင့်အထက်
ယန်း ၆၀၀၀ ဆိုဒ်အကြီး (အလျား + အကျယ် = 1001 မှ 1300px အတွင်း) ၅ ပွိုင့် နှင့်အထက်
ယန်း ၇၀၀၀ အများဆုံးဆိုဒ် ( အလျား + အကျယ် = 1301 မှ 1500 px အတွင်း သို့ အောက်) ၅ ပွိုင့် နှင့်အထက်
Banner ပြောင်းလဲခြင်း ယန်း ၅၀၀ - - Bannerအခြေခံဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးပြုပြင်ခြင်းအလုပ် banner ဆိုဒ် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ၊ sale banner ပေါ်ရှိ ရက်စွဲများ ပြောင်းလဲပေးခြင်း နှင့် banner ထုတ်ကုန်ပေါ်ရှိ ထုတ်ကုန်များနှင့် စျေးနှုန်းများ ပြောငိးလဲပေးခြင်း (Simple'Z မှပြုလုပ်သော Bannerများအတွက်သာ ) အခြား ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်သော Banner များအတွက် အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်အခစျေးနှုန်းအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အမြန်ကြေး၊ ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ၊ စသည်ဖြင့်
အမြန်ကြေး ၃၀% ပရီမီယံ သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပုံမှန်ထက်တိုတောင်းသောအချိန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းပို့လိုပါ ကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့်ယူနစ်စျေးနှုန်း + 30% ကို ကောက်ခံပါမည်။
ဝန်ဆောင်မှု အခကြေးငွေ ယန်း ၈၀၀၀ လတစ်လရဲ့ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်နှုန်းကိုမရောက်ရှိပါက , သီးခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေ ထပ်မံပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေးချေရမည့် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပါက ကျော်လွန်သည့်လအတွက်သာမက ကျန်လများ အတွက်ပါ ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။